IDM UltraEdit v21 full version+keygen - .::just for share::.
Home » Software များ » IDM UltraEdit v21 full version+keygen
IDM UltraEdit v21 full version+keygen
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ IDM Ultra Edit ဆိုတဲ့ Programming သမားတွေ Web developer တွေ၊ Softwrare Developer တွေ၊ SystemAdministrator တွေ၊ Technical Writer တွေ အတွက် တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။Program Language တွေအစုံ Support လုပ်နိုင်သလို CVS ( Concurrent Versions System ) ကိုControl လုပ်နိုင်တာ SVN (Subversion) တွေကို ပေါင်း စပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်တာအပြင်အခြားများစွာသောနည်းလမ်းတွေကိုလည်းအသုံးချ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Programming ကိုစိတ်ဝင်စားသူများလက်ကိုင်ထားသင့်တဲ့IDM Toolsလေးဖြစ်ပါတယ်
ကျန်တဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေကိုအောက်မှ ကြည့်လိုက်ကြပါ ...........အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ
- Ability to edit text files and programming languages.
- Support for files of more than 4GB of RAM, and consumes very little
- The ability to detect errors in coding HTML coding language
- Ability to use the Macro feature in the software to record various events
- Support for 64-bit files on 32-bit Windows
- A word full circle for different programming languages
- Drag & Drop feature to move the selected text